Rap metal - ဝီကီပီးဒီးယား
၁၉၈၀ နှောင်းပိုင်း, အမေရိကန်။
Rap metal သည် rap rock နှင့် Alternative metal တို့၏ မျိုးခွဲတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ဟစ်ဟော့ နှင့် heavy metal တို့၏ vocal နှင့် ပေါင်းစပ်ထားကာ ၁၉၈၇ ခုနှစ်တွင် နယူးယောက် မှ thrash metal တီးဝိုင်းဖြစ်သည့် Anrax တီးဝိုင်းသည် hip hop နှင့် heavy metal တို့ရောစပ်ထားသည့် extended pay (vinyl record) တွင် မှတ်တမ်းတင်ထားသော I’m the Man နှင့် hip hop နှင့် thrash metal တို့ရောစပ်ထားသော Public Enemy (hip hop group) တို့မှ remake ပြန်လုပ်ထားသည်။
ခေတ်ရေစီးကြောင်းအလိုက် ရေပန်းစားလာခြင်း (၁၉၉၀ - ၂၀၀၀ အစောပိုင်း)[ပြင်ဆင်ရန်]
၁၉၉၀ ခုနှစ်တွင် rap metal သည် ခေတ်ရေစီးကြောင်းတွင် ကျော်ကြားမှု ထိပ်ဆုံးသို့ ရောက်ခဲ့သည်။ နမှုနာအားဖြင့် Faith No More ၏ Epic သီချင်းသည် အဓိကကျသော အောင်မြင်မှုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Billboard Hot 100 တွင် နံပါတ် ၉ နေရာသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် Rage Against Machine ၏ “Evil Empire” albumသည် Billboard 200 တွင် နံပါတ်၁နေရာသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ၁၉၉၉ တွင် သူတို့၏ တတိယမြောက် album ဖြစ်သည့် The Battle of Los Angeles သည် ထွက်ထွက်ချင်းတွင် Billboard 200 တွင် ထိပ်ဆုံးသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ပထမအပတ်တွင် အချပ်ရေ ၄၃၀၀၀၀ခွေ ရောင်းချနိုင်ခဲ့သည်။ ဤ album တွင် ပါဝင်သော သီချင်းသည် platinum hit ဖြစ်လာခဲ့သည်။
၁၉၉၈ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၁၈ တွင် Kid Rock ၏ “Devil Without A Cause” album ထွက်ရှိခဲ့သည်။ ၁၉၉၈ တွင် Northampton, Massachusetts ၌ Warped Tour ဂီတပွဲတော်ကျင်းပခဲ့ပြီး ၎င်း album တွင် ပါလာခဲ့သော Welcome2the party သီချင်းသည် မက်ဆာချူးဆက် နှင့် နယူးအင်္ဂလန်တွင် စိတ်ဝင်စားလာခဲ့သည်။ Kid Rock ၏ အရေးပါသော tour ဖြစ်သည့် Limptropolis တွင် Limp Bizkit နှင့် Staind တို့ကို လမ်းဖွင့်ပေးခဲ့သည်။ Kid Rock ၏ Cowboy သည် southern rock, country နှင့် rap တို့ကို ရောနှောထားခဲ့သည်။ ငုင်းသီချင်းသည် World Championship Wrestling တွင် American နပန်းသမား Jeff Jarrett ၏ theme ဖြစ်လာခဲ့သည်။ Kid Rock ၏ Only God knows Why သီချင်းသည် Billboard Hot 100 တွင် နံပါတ် ၁၉ နေရာသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ၎င်းသီချင်းသည် autotune effect effect သုံးထားသော ပထမဆုံးသီချင်းဖြစ်လာခဲ့သည်။ Kid Rock ၏ Devil Without A Cause သည် Recording Industry Associaton of America တွင် ၁၁ကြိမ်မြောက် platinum လက်မှတ် ရေးထိုးနိုင်ခဲ့သည်။
Kid Rock သည် Best New Artist အဖြစ် ၂၀၀၀ Grammy Award တွင် အဆိုပြုခံရသည်။ ၁၉၉၈ American အဆိုတော် Ice Cube War Peace vol 1 တွင် အချို့သီချင်းများတွင် nu metal နှင့် rap metal တို့၏ အခြေခံအပိုင်းများကို ရောနှောထားသည်။ ၎င်း album သည် Billboard 200 တွင် နံပါတ် ၇ နေရာသို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ပထမအပတ်တွင် ၁၈၀,၀၀၀ ရောင်းချနိုင်ခဲ့သည်။
၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် Florida Hip Hop နှင့် rap metal တို့လွှမ်းမိုးထားသည့် nu metal တီးဝိုင်း Limp Bizikit ၏ Significant Other Billboard 100 တွင် နံပါတ် ၁ နေရာသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ဖြန့်ချိပြီး ပထမအပတ်တွင် ၆၄၃၈၇၄ အချပ်ရေ ရောင်းချနိုင်ခဲ့သည်။ ဒုတိယအပတ်တွင် ၃၃၅,၀၀၀ အချပ်ရေ ရောင်းချနိုင်ခဲ့သည်။ တတိယမြောက် album “Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water သည် US တွင် ၁ သန်းကျော်ရောင်းချနိုင်မှုနှင့်အတူ တစ်ပတ်အတွင်း ရောင်းရဆုံး rock album အဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ခံရသည်။ ထို့နှစ်အတွင်းတွင် Pa Pa Roach ၏ ပွဲဦးထွက် album “Infest” platinum hit ဖြစ်လာခဲ့သည်။
၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် P.O.D ၏ “The Fundamental Elements of Southtown သည် platinum ဖြစ်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၀ ခုနှစ်၏ ၁၄၃ အရောင်းရဆုံး album ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၂၀၀၀ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် Linkin Park ၏ ပွဲဦးထွက် album “Hybrid Theory” ကို ဖြန့်ချိခဲ့ပြီး the Best-Selling debut album နှင့် the Best Selling Nu Metal Album of All Time ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၂၀၀၁ ခုနှစ်ထွက်ရှိခဲ့သော single song “Crawling နှင့် fourth Single “ In The End” တို့သည် Grammy Award ရရှိခဲ့ပြီး ၂၁ရစု၏ ဆယ်စုနှစ်အတွင်း အသိအမှတ်ပြုခံရဆုံးသီချင်းများ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ rap rock တီးဝိုင်း Crazy Townသည် သူတို့၏ ၁၉၉၉ ခုနှစ် album “The Gift of Game” နှင့်အတူ nu metal ၏ mainstream အောင်မြင်မှုအဖြစ် စံချိန်တင်ခဲ့သည်။ ထူးထူးခြားခြား သူတို့၏ Butterfly သီချင်းသည် Billboard Hot 100 တွင် နံပါတ် ၁ နေရာသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ Modern Rock Tracks chart နှင့် Hot Dance Singles chart တွင် နံပါတ် ၁ နေရာသို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး Rhythmic Top 40 တွင် နံပါတ် ၆ နေရာ၊ Top 40 Mainstream chart တွင် နံပါတ် ၂ နေရာ နှင့် Top 40 Tracks chart တွင် နံပါတ် ၄ နေရာသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ “The Gift of Game” album သည် Billboard 200 တွင် နံပါတ် ၉ နေရာသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ထိုနှစ်အတောအတွင်းတွင် Saliva တီးဝိုင်း၏ “Every Six Seconds” album သည် စီးပွာရေးအရ အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ပြီး Billboard 200 တွင် နံပါတ် ၆ နေရာသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ၂၀၀၁ တွင် P.D.O ၏ “Satellite” albumသည် triple platinum ရရှိခဲ့ပြီး Billboard 200 chart တွင် ၆ နေရာသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။
↑ Alternative Metal။ AllMusic။ November 21, 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ “The first wave of alternative metal bands fused heavy metal with prog-rock (Jane's Addiction, Primus), garage punk (Soundgarden, Corrosion of Conformity), noise-rock (the Jesus Lizard, Helmet), funk (Faith No More, Living Colour), rap (Faith No More, Biohazard), industrial (Ministry, Nine Inch Nails), psychedelia (Soundgarden, Monster Magnet), and even world music (later Sepultura)... Some of those bands eventually broke out to wider audiences, often with help from the Lollapalooza tour, and they also set the stage foranew wave of alt-metal that emerged around 1993-94, centered around the Rap Metal fusions of Rage Against the Machine and Korn, the grindingly dissonant Tool, the heavily production-reliant White Zombie, and the popular breakthrough of Nine Inch Nails. These bands would become the most influential forces in shaping the sound and style of alternative metal for the rest of the '90s, along with Pantera, whose thick, molten riffs sounded like no other thrash-metal band.”
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Rap_metal&oldid=689210" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၇ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၄:၅၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။